Somaliland: Saddexda Murashax Oo Mar Kale Kulankoodii Shalay Uu Ku Dhammaaday Natiijo La’aan Iyo Faysal & Cirro Oo U Muuqda Inay Jaanta Isla Heleen - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Saddexda Murashax Oo Mar Kale Kulankoodii Shalay Uu Ku Dhammaaday Natiijo...
Saddexda murashax madaxweyne ee saddexda xisbi ee KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirr) iyo UCID Faysal Cali Waraabe, ayaa ku duuldaraysay inay go’aan midaysan ka gaadhaan in la bilaabo qaybinta kaadhadhka cod bixiyayaasha oo ay doorashadu wakhtigeeda ku qabsoonto iyo in dib loo dhigo kaadhadh qaybinta abaarta dalka ka jirta ee adag darteed.
Kulan saacado qaatay oo aanu goob joog ahayn guddiga doorashooyinku, ayay saddexda murashax shalay ku yeesheen Hargeysa. Hase yeeshee markii kulanku dhammaaday waxa ay kala taagnaayeen laba aragtiyood oo aad u kala fog. Labada murashax mucaarad ee UCID iyo Waddani ayaa cadeeyay inay aaminsanyihiin aragti midaysan oo ah in la bilaabo gurmadka abaaraha oo la iska joojiyo kaadhadh qaybinta iyo doorashooyinka, iyadoo laga duulayo abaarta jirta iyo warbixinta guddiga doorashada. Laakiin murashaxa xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, ayaa isagu taagan mawqif taas ka duwan.
Ugu horayn guddoomiyaha iyo murashaxa KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, oo markii kulanku dhammaaday saxaafadda la hadlay ayaa yidhi “Ta doorashada, Laba rayi ayaanu maanta isu keenay, annagu haddaanu xisbi xaakimkii nahay waxaanu taaganahay waxa doorashada wakthiga la goynayo iyo ka hadalkeeda inoo haya guddiga doorashooyinka, iyagaana xaaladda qiimaynteeda oo ku dhawaaqi kara sidaas hala yeelo, kaas ayaanu u hoggaansamaynaa haddaanu nahay xukuumadda iyo xisbul xaakimka, qolada kalena mid taas ka duwan ayay keeneen waanan ku ixtiraamaynaa, waxaanuse isla ogolnahay dhammantayo inaanu ka talino wixii dalkeena iyo umadeena u dan ah, mar walba inay ta’ koowaad noqotaa inay wixii dalkeena wax u taraya aynu arrintaas iskaga gaadhno.”
Murashaxa xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, ayaa isaguna wuxuu qabaa fikirkan “Waxay guddiga doorashadu sheegeen in 74% ay dalka abaari ka jirto, waxa kaloo sheegeen in dadkii kaadhadhka la siin lahaa 868 goobood intii badnayd ay ka maqanyihin, gaar ahaan gobalada bari goobihii abaarta awgeed, waxaan ognahay in abaartu sii xumaanayso, dhimashadii dadkana waan maqlaynaa. waxaanu ku qanacsanahay maadaama oo goobahaas dadku ka maqanyihiin inaanay munaasib ahayn in 21 January dadka kaadhadh loo qaybin karin 70% iyadoo maqanyihin, taasi waxay kalifaysaa maadaama dadku maqanyahay in laga wada tashado doorashadii ma qaban karnaa, kaadhadhkii ma qaybin karnaa, rayigaasi wuxuu noogu muuqday dadku inuu badbaado u baahanyahay oo badbaada la horaysiiyo.”
Faysal Cali Warabe
Murashaxa xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa isaguna wuxuu yidhi “Maanta arrintan taagani arrin komishan ka talin karo maaha, waa arrin damiirka iyo xaaladda dalkeenu marayo, maalin bulsho caalam loo habrado maaha ee waa maalin Alle laga baqo iyo dadka aan doonayno inaan u talino, annaga waxay noogu muuqatya inay bilaa damiir tahay iyadoo abaarta taagani tahay mid aan hore inoo soo marin, inaynu gacmaha is qabsano oo ka baxno doorashooyinka iyo kursi doonka oo badbaada dadkeena ka fikirno.”
Saxaafadda ayaa murashixiinta weydiisay inay u muuqdaan inaanay dadkooda ka naxayn oo ay doorasho ku mashquulsanyihiin, marka la barbar dhigo sidii ay dawladii Maxamed Siyaad Barre sannadkii 1974 ugu gurmatay dadka reer Somalialnd oo ay ku dhufatay abaartii dabo dheer. Faysal Cali Waraabe ayaa si kaftan leh ugu jawaabay “Intaas annagu waanu arkaynaaye Muuse [murashaxa KULMIYE] u sheeg”
Muuse Biixi Cabdi, ayaa isaguna wuxuu su’aashan kaga jawaabay “Wax walba waxaan ka horumarinaynaa abaarta gurmadkeeda, horena waa loogu jiray imikana waa lagu jiraa.”